बढ्यो आज अमेरिकी डलरको भाउ, कुन देशको कति ? – Khabar Silo
बढ्यो आज अमेरिकी डलरको भाउ, कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज (मंगलबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य देशको विनिमयदर बढेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ २८ पैसा तोकेको छ।
काठमाडौं । दसैं, तिहार र छठका लागि सरकारले खसी, बोका र च्याङग्राको बिक्रीवितरण सुरु गरेको छ । सोमबारदेखि सरकारले काठमाडौंको थापाथलीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको अञ्चल कार्यालय परिसरबाट खसिबोका तथा च्यांग्रा बेच्न सुरु गरेको हो । खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ कम्पनी गाभिएर बनेको नयाँ कम्पनीले दसैंको लागि छुटमा मासुजन्य जिउँदो पशु बेच्न थालेको […]
आज घट्यो विदेशी मुद्राको भाउ, कुन देशको कति?
काठमाडौं । आज (शुक्रबार) अमेरिकी डलरको भाउ ओरालो लागेको छ । आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११५ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रिदर १४२ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ५७ […]
काठमाडौं । आज साताको चौंथो दिन (बुधबार) सुनको भाउ थोरै घटेको छ । मंगलबार एकै दिन ६ सय रुपैयाँ बढेर प्रतितोला ७० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आज एक सय रुपैयाँ घटेको हो । आज छापावाल सुन प्रतितोला ७० हजार ६ सय तथा तेजावी सुन प्रतितोला ७० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार […]
नेयमार चार साताका लागि मैदान बाहिर